SUUQA: Xiddig ay si weyn u dooneysay Man United oo kooxdiisa ku wargaliyay inuu ku riyoodo ka ciyaarista Old Trafford. – Gool FM
(England) 12 June 2019. Manchester United ayaa xagaagan si weyn u qorsheyneysaa saxiixyo waaweyn xagaagan si ay ugu yaraan tartan u gasho tartamada ay fasalka soo aadan ka qeyb galeyso, Ole ciyaartoyda uu aad u doonayo waxaa ka mid ah daafaca midig ee Crystal Palace -Aaron Wan-Bissaka.
Daafacaan reer England ayaa kooxdiisa u sheegay inuu ku riyoodo ka ciyaarista garoonka Old Trafford, wuxuuna kusoo aaday hadalkiisa xilli Palace ay dooneyso iney xiddigeeda ceshato ama ugu yaraan ay ku fasaxdo qiimaha ugu fiican oo ay kaga samri karto.
Ole waxaa loo sheegay inuu xiddigaan kasoo gudbiyo dalab 60 Malyan oo Pound ah si loogu wareejiyo Aaron Wan-Bissaka, balse wali Red Devils lama kulmin lacagaha ay weydiisatay Palace.
Si kastaba xiddigaan ma doonayo inuu noqdo dhibaatada labadaan kooxood u dhaxeysa xagaagan, iyadoo ay taasi jirto ayey hadana labada kooxoodba dagaal ugu jiraan daafaca Norwich City Max Aarons.
Wan-Bissaka wuxuu doonayaa inuu si dhaqso leh ugu dhaqaaqo Old Trafford, sidaas darteed Palace waxey ku qasban tahay iney xilli hore u dhaqaaqdo Max Aarons.
Sida The Sun ay qortay xiddigaan warqad codsi ah uma gudbin kooxdiisa, balse wuxuu u sheegay iney riyo u tahay ka ciyaarista Old Trafford.